कस्तो अचम्म? – Page 24 – Light Nepal
Category: कस्तो अचम्म?
यस्तो छ संसारकै सर्वाधिक महँगो कार, जसको मूल्य सुन्दै होश उड्छ
July 25, 2018 लाइट नेपालLeaveaComment on यस्तो छ संसारकै सर्वाधिक महँगो कार, जसको मूल्य सुन्दै होश उड्छ
काठमाडौं, ९ साउन । इटालीयन कार कम्पनी पगानी अटोमोबाइल फाउन्डर होरेशियोले बेलायतको पश्चिमी सक्सेसमा आयोजित गुडवुड फेस्टिवल अफ स्पिड २०१८ मा संसारकै सबैभन्दा महगोे कार सार्वजनिक गरेको छ । पगानीले एचपी वार्शेटा नाम दिइएको सो कारको मुल्य १३.५ मिलीयन पाउन्ड अर्थात २ सय १७ करोड निर्धारण गरेको छ । यो कार हालसम्म उत्पादन भएका मध्ये […]
इज्जतका लागि बुवाले छोरीलाई ज्यूँदै जलाए
July 22, 2018 लाइट नेपालLeaveaComment on इज्जतका लागि बुवाले छोरीलाई ज्यूँदै जलाए
काठमाडौं, ६ साउन । शुरैह नियाजी /बीबीसी- भारतको मध्य प्रदेशको खण्डवा जिल्लामा एक युवतीलाई उनकै बुवाले जिउँदै जलाएका छन् । पुलिसका अनुसार इज्जतका लागि हत्याको यो मामलामा युवतीले आफ्नो परिवारको इच्छाबिना विवाह गर्ने सोच बनाएकी थिइन् । शुक्रबार १० वर्षीया युवती लक्ष्मी बाई आफ्ना प्रेमी राजकुमार लौवंशीको घर गएकी थिइन् । त्यहाँ लक्ष्मीलाई देखेर उनका […]
अब सेल्फी खिच्दा पनि पैसा पाइने
July 16, 2018 लाइट नेपालLeaveaComment on अब सेल्फी खिच्दा पनि पैसा पाइने
काठमाडौं, ३२ असार । हरियाणा सरकारले अब सेल्फी खिचेर अपलोड गरेबापत् पैसा दिने भएको छ । इन्डियन एक्सप्रेस अनुसार ६ देखि १२ कक्षाका विद्यार्थीहरुले बिरुवा रोपिरहेको सेल्फी खिचेर एपमा अपलोड गर्दा प्रत्येक ६ महिनामा ५० भारु प्रोत्साहनस्वरुप पाइने बताइएको छ । हरियाण राज्यलाई हराभरा बनाउने उद्देश्यसहित ‘पौधागिरी’ अभियान अन्तर्गत यस्तो निर्णय गरिएको हो । मुख्यमन्त्री […]